९५ जना क्षमताको जेलमा २ सय ९५ कैदी | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
९५ जना क्षमताको जेलमा २ सय ९५ कैदी
प्रकाशित मिति १० माघ २०७५, बिहीबार १२:३० लेखक नेपाली जनता
कञ्चनपुर । महेन्द्रनगरस्थित जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैंदीबन्दी भएपछि सुत्ने ठाउँको अभाव भएको छ ।
कारागारमा ९५ जनाको क्षमता भए पनि दुई सय ९५ कैदीबन्दी राखिएको छ । क्षमता भन्दा तेब्बर कैंदीबन्दी भएपछि सुत्नका लागि ठाउँ अभाव भएको कारागारका प्रमुख श्यामप्रसाद भट्टले बताए । ‘थप कैंदीबन्दीलाई राख्नका लागि भवनको अभाव छ’, उनले भने, ‘त्यसैले ग्यालरी र भान्सामा कैदीबन्दीलाई सुताउनु परेको छ ।’ कारागारमा कैदीबन्दी बस्नका लागि दुई ब्लक छन् । ती दुबै ब्लकको ग्यालरीमा कैदीबन्दी बस्ने गरेका छन् ।
चिसोसँगै न्यानो ओढ्ने कपडाको समेत अभाव रहेको प्रमुख भट्टले जानकारी दिए । भवन निर्माणका लागि कारागार व्यवस्था विभागमा जानकारी गराइए पनि सुनवाई हुन नसक्दा कैंदीबन्दीले सुत्नका लागि सास्ती खेप्नु परेको उनले बताए । कारागारका बर्षौ पुराना जिर्ण भवनको मर्मत सम्भारको कार्य हुन सकेको छैन । पुराना भवन चुहिने भएकाले बर्षातका बेला कैंदीबन्दीले झनै सास्ती खेप्नु परेको छ ।
भवन भित्रै त्रिपालको छाना बनाएर कारागार प्रशासनले कैंदीबन्दीलाई राख्नुपर्ने बाध्यता छ । भवनमा बर्षौ पहिले लगाईएका इट्टा समेत खिइएर झर्न थालेका छन् । पर्खाल भित्रको च्यानल गेट समेत पुरानो भएका कारण लगाउन गाह्रो हुने गरेको कैदीबन्दीले बताएका छन् ।
कारागार विभागबाट थोरै बजेट आउँदा कैदीबन्दीको स्वास्थ्योपचार र खाना खर्चका लागि समेत सो रकमले नपुग्दा अन्य मर्मत सम्भार र निर्माणका कार्य हुन नसकेको प्रमुख भट्टको भनाई छ । २०३२ मा स्थापना भएको कारागार पाँच विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
जाजरकोटमा फैलिएको भाइरल नियन्त्रणबाहिर, मृत्यु हुनेको संख्या १४ पुग्यो !
जाजरकोट । तीन सातादेखि जाजरकोटमा फैलिएको भाइरल ज्वरोको प्रकोपबाट थप तीन…
खुम्चँदै शिक्षाका संरचना, ३ मन्त्रालय गाभेपनि संरचना भने चुस्त बनाउने तयारी !
काठमाडौं । केन्द्रका अधिकार स्थानीय तहहरूलाई दिइएपछि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायको संरचना खुम्चने भएको छ । सरकारको निर्णयमा ३ मन्त्रालय…
विश्व कविता दिवस रे, खै के लेखुँ कविता !!
तेत्तिस कोटि देवी देवताहरू
ढुङ्गामा सीमित भए पछि
साँढे चढेर हिँडेका पशुपति
कुन्नि कता हो कता गए पछि
उजाड मन्दिरहरूमा आजकल
घण्टहरू एकोहोरो मात्र…
रेडियो टेलिभिजनलाई इजाजत रोकियो, प्रविधिमा सरकारकै अंकुश
काठमाडौं । सरकारले रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल प्रसारणको नयाँ इजाजतमा रोक लगाएको छ ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड, क्षमता वृद्धिलगायात विषयमा…
डोटी । तीन दिनदेखिको लगातारको वर्र्षाले डोटीका ग्रामीण सडकहरु अवरुद्ध भएका छन् ।
वर्षाले जिल्लाका ग्रामीण सडकहरुमा पहिरो खस्दा यातायात…
ध्वनीभन्दा ५ गुणा तिव्र गतिमा चल्ने विमान, ४ घण्टामा पृथ्वीमा वारपार !
एजेन्सी । के तपाइँले कल्पना गर्नुभएको छ रु आउँदो केही वर्षभित्रमा पृथ्वीको एउटा कुनाबाट अर्को जुनसुकै कुनामा जम्मा ४…